Vaovao - Inona marina izany blockchain?
Tamin'ny 31 Oktobra 2008, ID iray nosoniavin'i Satoshi Nakamoto no namaha io olana io tamin'ny taratasy 9 pejy momba ny fomba andoavako vola ahy amin'ny tambajotran-tserasera tsy mitonona anarana sy manana fizaram-pahefana tanteraka.
Fantatsika izao fa ilay lehilahy miafina fantatra amin'ny anarana hoe Satoshi Nakamoto sy ireo pejy sivy ireo dia noforonina tamin'ny rivotra manify mitovy amin'ny 100 miliara RMB amin'ny bitcoin sy ny haitao izay manome hery azy, ny blockchain.
Raha tsy misy antoko fahatelo atokisana, ny olana lehibe indrindra dia tsy misy amintsika afaka mifampatoky, ka amin'ny tontolon'ny sakana, ny famindrana dia tsy maintsy alefa mba hahafantaran'ny tsirairay ny tantaran'ny tsirairay sy ny dolara tsirairay avy ao aminy. Network. Hanamarina ny olona fa io tokoa no nolazaiko tamin'ny sonia elektronika, ary avy eo napetraka tao anaty birao. Ity birao ity no sakana. Mampifandray ireo sakana dia ny sakana. Izy io dia mirakitra ny fifanakalozana Bitcoin rehetra hatramin'ny nanombohany ka hatramin'izao, ary ankehitriny dia manodidina ny 600.000 ny sakana, miaraka amin'ny fifanakalozana roa na telo arivo voasoratra ao amin'ny sakana tsirairay, ary ny kaonty rehetra, ao anatin'izany ny anao sy ny ahy, dia mahatadidy tsara ny vola ananany, aiza avy izy io, avy aiza no nandaniany azy, ary mangarahara sy misokatra izy io.
Ao amin'ny tambajotra blockchain, ny tsirairay dia mitazona birao fampiasa havaozina mitovy amin'ny tena izy. Tsy mahagaga raha ny fahatokisana ny birao no vato fehizoron'ny vola dizitaly, ary raha tsy mandeha ny birao, tsy misy vola hiasa tsara.
Mampametraka fanontaniana roa vaovao anefa izany: iza no mitahiry ny boky ho an'ny rehetra? Ahoana no ahazoanao antoka fa tsy hosoka ireo boky?
Raha samy afaka mitazona birao iray ny tsirairay, dia mety tsy hitovy ny fifanakalozana sy ny filaharan'ny fifanakalozana ao anatin'ny sakana tsirairay, ary raha misy fidirana diso fanahy iniana, vao mainka hisavoritaka izany. Tsy azo atao ny mahazo ledger izay eken'ny rehetra.
Ka ilay mitazona ny boky dia tsy maintsy mandray ny olona rehetra hanaiky azy mba ho fanamiana ny bokin'ny tsirairay. Io koa dia fantatra amin'ny hoe mekanisma marimaritra iraisana.
Androany dia misy karazana rafitra marimaritra iraisana isan-karazany amin'ny blockchains isan-karazany, ary ny vahaolana nataon'i Satoshi dia ny fanaovana ilay olana. Izay miasa ny valiny aloha dia manan-jo hitandrina ireo boky. Ity rafitra ity dia antsoina hoe PoW: Porofon'ny asa, porofon'ny asa.
Ny toetran'ny fanaporofoana nyvesaran'ny asa dia feno, ary arakaraky ny herin'ny arithmetika no ananan'ny fitaovanao dia avo kokoa ny mety hahitanao ny valiny.
Mba hanaovana izany dia ampiasaina ny encryption hash.
Raiso ny algorithm SHA256, ohatra, ny karazan-tarehin-tsoratra voahorona miaraka aminy dia manome kofehy tokana misy isa 256-bit. Raha novaina tamin'ny fomba rehetra ny fampiasa voalohany, dia tsy hitovy tanteraka ilay isa voaharo.
Raiso ny algorithm SHA256, ohatra, ny karazan-tarehin-tsoratra voahorona miaraka aminy dia manome kofehy tokana misy isa 256-bit. Raha novaina tamin'ny fomba rehetra ny fampiasa voalohany, dia tsy hitovy tanteraka ilay isa voaharo
Rehefa manokatra sakana iray isika dia afaka mahita ny isan'ny fifanakalozana voarakitra ao amin'io sakana io, ny antsipirian'ny fifampiraharahana, ny lohatenin'ny block ary ny fampahalalana hafa.
Ny lohatenin'ny lohan-tsolika dia marika iray misy sakana misy fampahalalana toy ny timestamp, ny root root Mer, ny isa isa ary ny hash an'ny sakana teo aloha, ary ny fanaovana kajy SHA256 faharoa amin'ny lohatenin'ny sakana dia hanome antsika ny hash an'io sakana io.
Raha te hanaraka dia mila manangona ireo mombamomba isan-karazany ao amin'ny sakana ianao, ary avy eo manova ity isa tsy mitombina ity ao amin'ny lohan-tsoroka mba hahafahan'ny hasim-pidirana hosasana hahazoana sanda hash izay ny nomerao voalohany n dia 0 aorian'ny fikajiana has .
Tsy misy afa-tsy roa monja ny isan'ny tarehimarika tsirairay: 1 sy 0, ka ny fahombiazan'ny fahombiazana isaky ny fanovana ny isa isa dia iray nth of 2. Ohatra, raha 1 ny n, izany hoe raha mbola ny isa voalohany dia 0, avy eo ny mety hahitana fahombiazana dia 1 amin'ny 2.
Arakaraky ny habetsaky ny herin'ny computing ao amin'ny tambajotra no betsaka ny isan'ny zerô isa, ary vao mainka sarotra ny manaporofo ny enta-mavesatra.
Androany, ao amin'ny tambajotra Bitcoin dia 76 eo ho eo, izay tahan'ny fahombiazan'ny 1 amin'ny faritra 76 isaky ny 2, na saika 1 amin'ny 755 trillion.
Miaraka amin'ny karatra sary 8.000 $ RTX 2080Ti, 1407 taona eo ho eo no isaina.
Tena tsy mora ny mahazo ny matematika marina, fa raha vantany vao manao izany ianao, dia afaka manamarina ao anatin'ny indray mipi-maso ny rehetra fa marina ny anao. Raha marina izany dia hampifandraisan'ny rehetra amin'ny birao ilay birao ary manomboka manangona entana ao amin'ny sakana manaraka izy ireo.
Amin'izany fomba izany, ny tsirairay ao amin'ny tamba-jotra dia manana lisitra mitovy sy nohavaozina amin'ny fotoana tena izy.
Ary mba hitazomana ny rehetra hanao ny fitahirizana boky, ny teboka voalohany nahavita namarana ny sakana dia hahazo valisoa amin'ny rafitra, izay 12,5 bitcoins ankehitriny, na efa ho 600.000 RMB. Ity fomba ity dia fantatra amin'ny anarana hoe fitrandrahana harena ankibon'ny tany.
Etsy ankilany, mba hisorohana ny fanelingelenana ny birao, ny birao vaovao izay nanampy dia mila manoratra ny sandan'ny hash an'ny sakana teo aloha, fantatra ihany koa amin'ny hoe mpanondro hash, ao amin'ny lohatenin'ny sakana. Ny tondro mandroso tsy miova toy izany dia hanondro ny sakana voalohany, mifatotra rojo vy ny sakana rehetra.
Raha manova ny tarehin-tsoratra rehetra amin'ny sakana rehetra ianao, dia manova ny sanda hash an'io sakana io ianao, manaloka ny tondro hash an'ny block manaraka.
Noho izany dia mila manova ny tondro hash an'ny sakana manaraka ianao, fa izany kosa dia misy fiantraikany amin'ny sanda hash an'io sakana io, noho izany dia mila mamerina manisa ny isan'ny kisendrasendra ianao, ary rehefa vita ny kajy, dia mila manova ny sakana manaraka ianao an'io sakana io mandra-panovanao ny sakana rehetra aorian'io sakana io, izay tena manahirana.
Izany dia tsy ahafahan'ny mpitahiry boky manara-maso ireo sandoka na dia tiany aza izany. Noho ny sonia elektronika dia tsy afaka mametaka famindrana avy amin'ny olon-kafa mankany aminy ny tompon-trano, ary noho ny tantaran'ny boky dia tsy afaka manova vola amina rivotra madinidinika koa izy.
Saingy mampametra-panontaniana vaovao ity: raha misy olona roa mameno ny kajy miaraka amin'ny fotoana iray ary manamboatra sakana vaovao, iza no tokony henoin'izy ireo?
Ny valiny dia izay lava ampy hihainoana azy, ary ankehitriny ny olon-drehetra afaka manangona entana aorian'ny sakana roa. Ohatra, raha misafidy ny hifandray amin'ny B ny bandy voalohany mamita ny kajy amin'ny fihodinana manaraka dia ho lava kokoa ny rojo B ary ny olon-drehetra dia mety hifandray amin'i B ihany koa.
Ao anatin'ny fonosana enina amin'ny fonosana, matetika no mandresy ny mpandresy, ary ny varotra rojo nilaozana dia nesorina ary napetraka tao amin'ny dobo fivarotana mba hipoka.
Saingy satria iza no lava indrindra mihaino izay lava indrindra, raha toa ka mahay manisa tsara kokoa noho ny olon-drehetra ianao, ary mihoatra ny 51% ny fahefanao manisa, dia azonao atao ny mamantatra ny rojo lava indrindra, avy eo mifehy ny lisitra. .
Ka arakaraka ny haben'ny herin'ny kaonty ataon'ny mpitrandraka ao amin'ny tontolon'ny Bitcoin no betsaka ny isan'ny aotra tsy maintsy anisaan'ny olona rehetra ary miantoka fa tsy misy afaka mifehy ilay lisitra.
Fa ny blockchains hafa misy mpandray anjara vitsivitsy kosa tsy dia mandeha tsara, toy ny fanafihana 51% amin'ny vola dizitaly antsoina hoe Bitcoin Gold tamin'ny 15 Mey 2018.
Ny mpanafika dia namindra $ 10 tapitrisa $ bitgold manokana ho an'ny fifanakalozana, ary ity famindrana ity dia voarakitra ao amin'ny block A. Ireo mpanafika dia afaka namindra $ 10 tapitrisa amin'ny bitgold azy ireo manokana ho fifanakalozana. Mandritra izany fotoana izany, ny mpanafika dia nanomana tsiambaratelo block B izay tsy nisy ny famindrana ary nanisa sakana vaovao taorian'ny block B. Ilay mpanafika koa dia nanomana miafina ny sakana B izay tsy nitrangan'ny famindrana.
Raha vantany vao voamarina ny famindrana amin'ny rojo A dia afaka manaisotra ilay volamena kely amin'ny fifanakalozana ilay mpanafika. Saingy satria ny herin'ny kaonty mpanafika dia 51% lehibe kokoa noho ny tambajotra iray manontolo, ny rojo B dia ho lava kokoa noho ny rojo A. ary amin'ny famoahana rojo B lava kokoa amin'ny tambajotra iray manontolo, haverina soratana ny tantara, ny rojo B dia hisolo ny Ny rojo iray ho toy ny tena rojo lehibe, ary ny famindrana ny fifanakalozana ao amin'ny Block A dia hesorina, ahazoana 10 tapitrisa ilay mpanafika.
Androany, ny fomba mora indrindra ho an'ny salanisa tsy manana fahefana aritmetika hahazoana vola dizitaly dia ny mividy azy amin'ny fifanakalozana ary esory amin'ny adiresy poketrao.
Ity adiresy ity dia avy amin'ny lakilen'ny tenanao manokana, izay nafenina, ary ny lakilem-bahoaka, izay nafenana, dia mahazo ny adiresy.
Amin'ny tamba-jotra tsy fantatra anarana toy ny blockchain, ny lakilen'ny tsy miankina irery ihany no afaka manaporofo fa ianao no izy, ary raha mbola miaraka amin'ny sonia elektronika novokarin'ny lakilanao manokana ny famindrana dia afaka manamafy ny rehetra fa manan-kery ny famindrana. Ka raha voatohintohina ny lakilen'ny tenanao manokana dia afaka mody manao anao ny olona ary mamindra ny vola.
crypto mining asic, btc fitoeran-javatra, kaontenera antminer, kaontenera antbox, fitaovana fitrandrahana crypto, fitoeran-javatra bitmain,